Powder Packaging Machine Factory - Igwe Ogo Eru Nkwakọ ngwaahịa Manufacturers, Suppliers
Igwe a adabara maka ịkwakọba ihe dị iche iche dịka shuga, nnu, granule kọfị, kọfị kọfị, mmiri ara ehi na mmiri mmiri, wdg.
Ọka ntụ ọka mbukota Machine ọka ọka ọka Packaging
Kọfị ntụ ntụ Packaging Machine
Chilli Powder Mbukota Machine Masala Mbukota Machine
Automatic obere akpa jupụta Ma Akara Machine N'ihi ntụ ntụ Products
Nnyefe Direct Yist Automatic Spirulina Powder obere akpa mbukota Machine
Anyị wuru eriri akpaaka anyị na-ejupụta iji nweta ụkpụrụ niile nke nri na ihe ọverageụ beụ, ọgwụ, ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ kemịkal. Anyị na-eji igwe anaghị agba nchara na Siemens njikwa iji na-adịgide adịgide na nkenke. Site n'iji akụkụ enwere azụmaahịa, anyị na-ebelata ọnụahịa nke inwe ma bulie akara ala gị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka a gbanwee mgbanwe na igwe na-ejuputa gị, anyị nwere ike ịnye mgbanwe dị iche iche na-enweghị ọnụahịa dị elu, iji mee ka eriri nkwakọ ngwaahịa gị ...
Rotary Powder obere akpa mbukota ntụ ọka ose Sugar Doypack na-ejuputa igwe nkwakọ ngwaahịa
Ngwa Ọrụ Auger na-ejuputa igwe na-enye nkenke, ọsọ na ntụgharị mgbe ị na-ejikwa ntụ na granulu. A na-ejikarị teknụzụ emeju anụ na-arụ ọrụ na ngwa chọrọ nkesa na ịnye ntụ ntụ, ngwa nri, ọka kọfị, kemịkal, ntụ ọka, shuga, nnu, ngwakọta mmiri na ngwaahịa ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya. Anyị na-enye ndị kasị elu auger fillers na-eji servo draịva, gụnyere igwe anaghị agba nchara ewu, mfe na-ewepụ tooli ...
Igwe eji eme obere akpa eji eme ihe maka nnu
A na-ejikarị igwe GAOGEPAK na-ejuputa ma na-akwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ nri, ihe ịchọ mma, ihe eji eme ihe, ọgwụ ndị na-emepụta ọgwụ na ihe ndị ọzọ. A na-achọ ya n'ọtụtụ mpaghara dị iche iche. Fọdụ ihe atụ nke ngalaba nri bụ kọfị, carbonate, shuga ntụ ntụ, ntụ ọka, ụdị ngwa nri niile, ntụ ntụ mmiri ara ehi. Ihe mkpuchi ntụ ntụ maka ụlọ ọrụ ọgwụ, na ngwaahịa ndị na-abụghị mmiri mmiri. Ihe atụ gụnyere nwa ntụ na ihe nchacha nhicha. A na-ejikarị igwe akụrụngwa eme ihe na ...
Coffee ntụ ntụ Guzosie Up obere akpa Packaging Machine
Site na igwe akụrụngwa akụrụngwa kọfị, ude, mmiri ara ehi ntụ ntụ, stachi, chili, ntụ ntụ, ihe mgbakwunye, pesticides, henna na ngwaahịa ntụ nwere ike ịjuju. (Powder sugar, mmiri ara ehi ntụ, kọfị, kọfị Turkish, chocolate powder, green tea, pharmaceutical powder, Energy drink, protein powder, henna) ntụ ntụ na ngwaahịa anaghị akwụ ụgwọ nwere ike iji igwe GAOGEPAK anyị na-akwakọba. GAOGEPAK engineer chepụtara ma mepụta igwe kwesiri ekwesiri dika njirimara po ...
Biiti Powder Rotary mbukota Machine Powder mkpọchi uwe obere akpa Packaging Machine
Infkpụrụ Ntuzi Ngwa, Achịcha, Brown Sugar, Achicha achicha, Cat Litter, Powder Cement, Chia Seeds, Cocoa Powder, Grass & Fennel Seeds, Grains, Jimmies & Sprinkles, Powder Cosmetic, Matcha Powder, Parsley & Oregano, Pancake Mix, Protein Powder , Curry Powder, Rice Products, Salt Products, Mkpụrụ Ngwaahịa, Fine Cut Taba, Turmeric Powder, Lentils, Nri ntụ nri, Fatịlaịza Pellets, Dum & Ground Kọfị, Toner Powder, Nkpako ntụ ntụ, ntụ ntụ ntụ, Sugar, Fatịlaịza Pellets. A ...
Akpaaka Pesticide Chemical Powder obere akpa mbukota Machine
Ezubere igwe eji mejuputa Auger iji mejuputa igwe nkpuchi di iche iche. Igwe anaghị agba nchara. Standard igba aluminum bench / n'ala isi. Otu-mpempe igwe anaghị agba nchara mkpuchi isi na akụkụ igwe anaghị agba nchara. 3-speed jupụta moto mbanye usoro. Jupụtara na nkume isi nkedo na anụ nkedo isi. Common Ngwa Infant Formula, Breadcrumb, Brown Sugar, Cake Mix, Cat Litter, Cement Powder, Chia Seeds, Cocoa Powder, Grass & Fennel Seeds, Grains, Jimmies & Sprinkles, Ihe Ngosiputa Ngwa ...